Semalt: SEO vs PPC နှင့် SMM
Semalt: SEO နှင့် PPC vs SMM
SEO၊ PPC နှင့် SMM ကိုနားလည်ခြင်း
SEO နှင့် PPC vs SMM ကိုနားလည်ခြင်း - တစ်ချက်ကြည့်ပါ
Semalt ကဘာလဲ - SEO, PPC, or SMM?
SERPs တွင်ပထမရာထူးရယူရန်တိုက်ပွဲ။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာများသည်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည်မည်မျှပင်နည်းပညာကျွမ်းကျင်သည်ဖြစ်စေ၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၏အဆင့်အတန်းကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်ယခင်ကထက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ, ကဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ နောက်ကွယ်မှအဓိကအကြောင်းပြချက်မှာဖောက်သည်၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပဲမဟာဗျူဟာများကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ပြိုင်ဘက်အတွက်ရလဒ်များကိုယူဆောင်လာသည့်အစီအစဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ချဉ်းကပ်နည်းကသင့်အားအလားတူအောင်မြင်မှုမျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်သည်ဖြစ်စေမဖြစ်စေနိုင်သည်။
နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအကြောင်းပြချက်မှာ SEO ကိုမှန်ကန်စွာနားလည်ရန်မဟုတ်ခြင်း၊ PPC၊ SMM နှင့်အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းလမ်းများ။ ၎င်းတို့ကိုပိုမိုနားလည်စေရန်ကူညီရန်အောက်ဖော်ပြပါထိပ်သုံးဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးချဉ်းကပ်နည်း ၃ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။
SEO, PPC နှင့် SMM တို့သည် Search Engine Optimization, Pay-Per-Click နှင့် Social Media Marketing တို့၏အတိုကောက်များဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားလည်းအွန်လိုင်းအသွားအလာနှင့်ပိုက်ဆံမောင်းနှင်များအတွက်လူသိများဝေါဟာရများဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုနားလည်ကြပါစို့။
1 ။ SEO (Search Engine Optimization)
SEO ဆိုသည်မှာရည်မှန်းချက်သည်ထိပ်ဆုံးမှသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးရှာဖွေရေးရလဒ်၏ပထမစာမျက်နှာတွင်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသောအခါစိတ်ထဲပေါ်ပေါက်လာသည့်ပထမဆုံးအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ SEO ဆိုသည်မှာဝက်ဘ်ဆိုက်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုတိုးတက်စေရန်၊ ၎င်း၏မြင်သာမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်နှင့်၎င်းကို ဦး တည်သည့်လမ်းကြောင်းများပိုမိုတိုးတက်စေရန်ချဉ်းကပ်နည်းဖြစ်သည်။
SEO ဆိုသည်မှာဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အမျိုးမျိုးသောနယ်ပယ်များတွင်သော့ချက်စာလုံးများထည့်သွင်းခြင်း၊ မတူညီသောစက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်တင်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းစတာတွေပါဝင်ပါတယ်။
SEO SEO အတွက်အကောင်းဆုံးသောဝက်ဘ်ဆိုက်သည်နောက်ဆုံးပေါ် SEO နည်းစနစ်များနှင့်မကိုက်ညီသောဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမြဲအားသာချက်ရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။
< ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်သုံးလေ့ရှိသော SEO နည်းစနစ်များမှာ
On-Page SEO ဆိုသည်မှာသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို SERPs တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနေအထားတွင်ရှိစေရန်သင်ပထမ ဦး ဆုံးအသုံးပြုသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ခေါင်းစဉ်များ၊ Meta Tags များ၊ Meta ဖော်ပြချက်၊ Alt စာသားများနှင့်အခြားနေရာများတွင်သော့ချက်စာလုံးများကိုမဟာဗျူဟာကျကျနေရာချခြင်းပါ ၀ င်သည်။
ဤပိုကောင်းအောင်လုပ်သည့်နည်းစနစ်တွင်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများရရှိသည်။ Off-page SEO ဆိုသည်မှာနည်းနည်းလှည်ပြီးအတွေ့အကြုံလိုအပ်သည်။ ဤနည်းစနစ်ကိုအောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာနှင့်အဆင့်မြင့်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များမှအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများရရှိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ဒီနည်းလမ်းမှာ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုတိုးတက်စေရန်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းများပါ ၀ င်သည်။ optimization ကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှနောက်ဆုံးပေါ်စည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီပြုလုပ်သည်။
ဤ SEO နည်းစနစ်၏အဓိကအာရုံစိုက်မှုမှာအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည် တုံ့ပြန်မှု၊ မလိုအပ်သောကြော်ငြာများကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အမြန်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်း။ ဤနည်းစနစ်များသည်ကြာရှည်ခံသော်လည်းနှေးသော်လည်းလက်တွေ့ဖြစ်နိုင်သည့်ရလဒ်များကိုရရှိစေသည်။
သင် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအဆင့်မြင့်အောင်လုပ်ရန်မသင့်လျော်သည့်နည်းလမ်းများပါ ၀ င်သောနာမတော်မှစိတ်ကူးတစ်ခုရကောင်းရနိုင်သည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နှင့်ကျွမ်းကျင်သူအများစုသည်ဤနည်းစနစ်များကိုသဘောမကျကြသောကြောင့်၎င်းတို့သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှချမှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည် Black Hat SEO ကို အသုံးပြု၍ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။ နည်းစနစ်များသည်အဆင့်နိမ့်သောသုံးစွဲသူ၏အတွေ့အကြုံကိုပေးရုံသာမကအကြောင်းအရာကိုမလျော်ကန်စွာဖော်ပြပေးသည်။ ဤနည်းစနစ်များသည်ရလဒ်များကိုမြန်ဆန်စေနိုင်သော်လည်းအချိန်အကြာကြီးတွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှအပြစ်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်တားမြစ်ခြင်းများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။
2 ။ PPC (Pay-Per-Click)
PPC (သို့) Pay-Per-Click ဆိုတာအွန်လိုင်းကြော်ငြာခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကြော်ငြာသူများသည်၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းကြော်ငြာများတွင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ကလစ်တိုင်းကိုပေးချေရန်တာဝန်ရှိသည်။ >
PPC ကြော်ငြာများမှာပုံစံအမျိုးမျိုးရှိကြပေမယ့်အသုံးအများဆုံးကတော့ရှာဖွေမှုရလဒ်များမှာရှာဖွေပြီးသော SEM (Search Engine Marketing) ကြော်ငြာများဖြစ်သည်။ လူများသည်တစ်ခုခုရှာဖွေရန်ရှာဖွေရေးယန္တရား၏အကူအညီကိုယူသောအခါထိုကြော်ငြာများပေါ်လာသည်။
PPC သည်ကြော်ငြာသူများသည်အသုံးပြုသူများသတင်းအချက်အလက်၊ ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်ရှာဖွေသည့်အခါတိကျစွာပစ်မှတ်ထားသောကြော်ငြာများကိုပြရန်ခွင့်ပြုသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကဂူဂဲလ်မှ“ ယောက်ျားအတွက် trimmer” ကိုရှာဖွေသည့်အခါပထမရလဒ် ၄ ခုသည် PPC ကြော်ငြာများဖြစ်သည်။ >
PPC သည် SEO မှသင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းရလဒ်များကိုပေးသည်။ နှစ်ခုနှင့်အဓိကကွာခြားချက်မှာ PPC တွင်သင်သည်ရှာဖွေမှုရလဒ်များ၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရောက်နေခြင်းအတွက်သင်ပေးရသည်၊ သို့သော် SEO နှင့်မတူပါ။
ဤကြော်ငြာပုံစံတွင်ကြော်ငြာရှင်များသည် တစ်စုံတစ် ဦး ကသူတို့၏ကြော်ငြာကိုနှိပ်လိုက်မှသာငွေပေးချေရန်၊ ထို့ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုသည် PPC ကိုအခြားကြော်ငြာအမျိုးအစားများထက်ပိုနှစ်သက်ကြသည်။
PPC သည်ချက်ချင်းရလဒ်များရရှိစေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကြော်ငြာရှင်သည်ရှာဖွေမှုရလဒ်များ၏ထိပ်တွင်ပေါ်ရန်ရက်သတ္တပတ်များသို့မဟုတ်ရက်ပေါင်းများစွာစောင့်ရန်မလိုအပ်ပါ။
PPC သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်သောကြောင့်၎င်းသည်မြင်သာမြင်သာမှုတိုးလာသည်နှင့်၎င်းသည်အသွားအလာပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။/li>
PPC ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတစ်ခုသည်ကြော်ငြာရှင်များကိုပိုမိုထိန်းချုပ်စေသည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အတွက် Pay-Per-Click ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတစ်ခုကိုသင်ပြုလုပ်နေပါကသင်၏ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း၊ ပထဝီအနေအထားနှင့်နေ့စွဲအလိုက်ကြော်ငြာများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
< b> မှတ်ချက်။ ။ PPC ကိုသတိထားရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ရေတိုနှင့်ရေရှည်သက်ရောက်မှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ PPC ၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည်ရလဒ်ကောင်းများမရနိုင်ပါ။
3 ။ SMM (လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး)
SMM ဆိုသည်မှာလူမှုရေးမီဒီယာလိုင်းများဖြစ်သောတွစ်တာ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့် LinkedIn တို့မှတဆင့်အခြားသူများအကြားမြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လူမှုရေးမီဒီယာအသုံးပြုသူများကိုအလွယ်တကူပစ်မှတ်ထားနိုင်သောကြောင့်ကြော်ငြာသူများသည် SMM ၏အားသာချက်ဖြစ်သည်။
ဒီနေ့အချိန်၌သုံးစွဲသူများသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်သွယ်မှုအရှိဆုံးနေရာဖြစ်သောကြောင့်ယနေ့ကြော်ငြာရှင်များသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာလမ်းကြောင်းများကိုပိုမိုရှာဖွေလာကြသည်။ ဒီအပြင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်၏အနာဂါတ်သည်လူမှုမီဒီယာဖြစ်သည်ဟုကျွမ်းကျင်သူများကယုံကြည်ကြသည်။
Paid Social Media Marketing သည်ပိုမိုထိရောက်ပြီးရလဒ်များကိုလည်းရရှိစေသည်။ SMM မှတဆင့်ပြုလုပ်သောကြော်ငြာသည် PPC နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ အချက်များစွာသည်ဆင်တူသည်။
PPC နှင့် SMM နှစ်ခုလုံးသည်ရှာဖွေခြင်းညီမျှခြင်းများတွင်အသုံးပြုသူများ၏အမူအကျင့်သဘောထားကိုထပ်ဖြည့်သည်။
SMM နှင့် PPC နှစ်ခုလုံးတွင်ကြော်ငြာရှင်များကလိုအပ်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကသူတို့၏ကြော်ငြာကိုနှိပ်လိုက်မှသာငွေပေးချေရမည်။
ကြော်ငြာရှင်တစ် ဦး သည် SMM နှင့် PPC မှတဆင့်ချက်ချင်းရလာဒ်များ (မြင်နိုင်မှု၊ အသွားအလာပိုမိုမြင့်မားမှု၊ ပိုမိုမြင့်မားသောပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အခြားသူများ) ချက်ချင်းရလာဒ်များ။
အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သောလက္ခဏာများအပြင် SMM နှင့် PPC တို့၏ဆိုးကျိုးများလည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်၏ပေးဆောင်သော SMM စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအဆုံးသတ်သောအခါသာယာလှပသောရလဒ်များကိုပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။
မကြာသေးမီအချိန်များအတွင်း SMM စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများသည်လူကြိုက်များလာပြီးရလဒ်များမှာလျင်မြန်။ ထိရောက်မှုရှိသောကြောင့် နှင့်ကြော်ငြာရှင်များ၏မျှော်လင့်ချက်များအရ
SEO vs PPC နှင့် SMM: တစ်ချက်မှာ
ပထမဆုံးစဉ်းစားသင့်သည့်အချက်မှာသင်၏ဘတ်ဂျက်ဖြစ်သည်။ သင့်ဆိုဒ်၏မြင်သာမှုကိုတိုးတက်စေရန်သင်မည်မျှသုံးစွဲနိုင်သည်၊ အသွားအလာနှင့်အခြားအရာများ။
အကယ်၍ သင်သည်အသေးစားသို့မဟုတ်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်နေပါကအကျိုးမရှိသည့်အဓိပ္ပာယ်မဲ့သောနည်းစနစ်များတွင်မရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်ပါ။ သင်နားမလည်သည့်နည်းစနစ်များကိုလည်းမဖြုန်းတီးသင့်ပါ။
သင့်ဘတ်ဂျက်ကိုအပြီးသတ်ပြီးတဲ့အခါ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများမည်မျှကြာရှည်မည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ အော်ဂဲနစ်နည်းလမ်းများသည်ရလဒ်များကိုရရှိရန်အချိန်ယူသကဲ့သို့ဤဝန်ဆောင်မှုများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာငှားရမ်းသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငွေပေးချေသောဝန်ဆောင်မှုများသည်ချက်ချင်းရလဒ်များရရှိစေသည်။ သင်အစဉ်သတိရသင့်သည့်အချက်တစ်ခုမှာရလဒ်များသည်အစတွင်သူတို့လျင်မြန်စွာပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်ကိုတွေ့ရသည့်အချက်အလက်များနှင့်အတူအမြဲသတိရသင့်သည်။
သင်တိုတိုသို့မဟုတ်ရေရှည်ရလဒ်များကိုသင်လိုချင်လားမရှာဖွေပါ။ သင်ဟာလေ့လာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအော်ဂဲနစ်နှင့်လစာပေးချေမှုဆိုင်ရာနည်းလမ်းများရဲ့ရလဒ်တွေကိုသိတယ်ဆိုရင် PPC သို့မဟုတ် SEM တို့လိုလခပေးသောနည်းစနစ်များကိုလောင်းခြင်းအားဖြင့်သင့် site ၏မြင်သာမှုနှင့်အသွားအလာကိုတိုးမြှင့်သင့်သည်။
သင်သည်ရေရှည်တည်မြဲသောရလဒ်များကိုလိုချင်ပါကသော့ချက်စာလုံးများကိုမဟာဗျူဟာကျကျနေရာချထားခြင်း၊ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဆိုက်၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုမြန်ဆန်စေခြင်းစသည့် SEO နည်းစနစ်များကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
သင့်ပြိုင်ဘက်များ၏အသုံးစရိတ်များ၊ သော့ချက်စာလုံးများနှင့်ချဉ်းကပ်မှုများကိုသင်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သည်။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလမ်းညွှန်ဖို့လမ်းညွှန်တစ်ခုရပြီးသင့်ရဲ့အိတ်ကပ်တွေကိုထိခိုက်စရာမလိုဘဲထိရောက်တဲ့အရောင်းမြှင့်တင်ရေးနည်းစနစ်တစ်ခုနဲ့အဆုံးသတ်သွားလိမ့်မယ်။
Semalt မှန်ကန်ကြောင်းရှင်းပြသည်။ SEO, PPC သို့မဟုတ် SMM?
Semalt ကျွမ်းကျင်သူများ တွင် ဒီအဖြေကိုရိုးရိုးလေးဖြေပါ။ သင်စီးပွားရေးလုပ်နေလျှင်အမြန်နှင့်ကြာရှည်ခံမည့်ရလဒ်များကိုသင်လိုအပ်လိမ့်မည်။
PPC နှင့် SMM ကဲ့သို့ပေးဆောင်သောချဉ်းကပ်မှုများအတွက်သင်လုပ်နိုင်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးပြီးတော့ SEO ဆိုသည်မှာအော်ဂဲနစ်။ အကယ်၍ သင်သည် Black Hat SEO နည်းစနစ်များကိုစွန့်ခွာလျှင်အဆင့်မြင့်ရာထူး၊ ယာဉ်အသွားအလာနှင့်အမြတ်အစွန်းများများရရှိရန်အားလုံးသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ယခု သင်အော်ဂဲနစ် (SEO) နှင့်ပေးချေသော (PPC နှင့် SMM) နည်းလမ်းများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ နောက်ထပ်လုပ်သင့်သည်မှာ၎င်းတို့ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
၀ ဘ်ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်အများစုသည်အခကြေးငွေနှင့်အော်ဂဲနစ်နည်းစနစ်များကိုရောနှော။ ရနိုင်သည့်နည်းဗျူဟာတစ်ခုကိုရောစပ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမဆိုမြှင့်တင်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝသောလုပ်သားအင်အားရှိသော Semalt ကဲ့သို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုငှားရမ်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးနည်းဖြင့်